Amaphesenti angu-70, emhlabathini, ahlanganiswa ngamanzi. Amaphesenti ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kuwo wonke amanzi emhlabeni ngamanzi usawoti. Amaphesenti angaphansi kwamathathu kuwo wonke amanzi ngamanzi amasha.
Emanzini amasha angama-3%, kuphela u-0.3% amanzi angaphezulu okutholakala kalula kithi ukuphuza noma ukusebenzisa ekukhiqizeni ukudla kanye nempahla esiyikhiqizayo ukuze siphile. Okunye okulandelayo:
69% - Iqhwa
0.7% - Emkhathini
30% - Ngaphansi komhlaba
Amanzi iyimithombo ephelele. Inani lamanzi elasemhlabeni iminyaka eyizigidi edlule lilapha manje futhi ngeke landa. Okuzoshintsha ukuthi sisisebenzisa kanjani le mithombo ewusizo neyokuphila ukuze sihlale siphile. Kudingeka sifunde ukuthi singalahleki. Emanzini amasha esiwasebenzisa:
I-70% isetshenziselwa ezolimo
20% ngezinhloso zezimboni kanye
10% emakhaya nokusetshenziswa kwabantu.
Ukukhiqiza ukudla kumele sivuselele njalo ukuthola izindlela ezintsha zokusebenzisa kancane nokuchitha kancane ekukhiqizeni ukudla kwethu.
Ukukhiqiza i-kilogram eyodwa yenkomo kuthatha amalitha angu-15 000 noma 15 m³ amanzi
Ukukhiqiza i-kilogram eyodwa yelayisi kuthatha ama-3 500 amalitha noma 3.5 m³ yamanzi.
Sinenhlanhla ukuthi kwezolimo zanamuhla, izinto ezintsha zenzele izindlela zokuqapha ngokucophelela okuqukethwe kwamanzi emhlabathini. Lokhu kuvumela ukuchelela okuphumelelayo ngokusebenzisa izinhlelo ezintsha zokunisela zokuphuza ezinjengezindawo zokunisela eziphansi komhlaba nangaphansi komhlaba. Kodwa namanje, amanzi angaphezu kwama-60% asetshenziselwa ukuchelela kwezolimo achitheka ngenxa yokungaphumeleli. Ngokulinganisa ngokuphumelelayo amanzi atholakalayo ezindaweni ezimpande zezitshalo ezahlukene, kuzosiza ekunciphiseni ukulahlekelwa.
Ukuqoqa Amanzi emvula ophahleni
Ukuqoqa amanzi noma 'ukuvunwa kwamanzi emvula' kusuka ophahleni ukusetshenziselwa indlu nokusetshenziswa kwensimu kwenziwa kabanzi eNingizimu Afrika...more
Ukubaluleka Kwamanzi Emvula Ukuvuna Nokulondoloza
Imikhuba emibi yokulondolozwa kwenhlabathi kanye nokuhlwanyelwa kwamahlathi kuholela ekukhuliseni komhlabathi omkhulu kanye nokwehla komhlaba....more
Ukunisela ukuhlinzeka ngamanzi ngamanzi ukuze kube nokukhula kwezitshalo noma ezinye izimila ngokusebenzisa imisele, iziteshi noma amapayipi...more
Kubalulekile ukwazi isimo somswakama somhlabathi ukuze umlimi anganisela isitshalo ngesikhathi esifanele ukuqinisekisa ukuthi kukhona umswakama odingekayo...more
Izinhlelo zokuvuna amanzi emvula
Kunezinhlelo ezintathu zokuvuna amanzi emvula. Ama-macro-catchment iqoqo lamanzi emvula avela ngaphandle kwepulazi....more
Imithombo Yamanzi, Isitoreji, Ukuthutha kanye Nokumpompa
Wonke amanzi afinyelela emhlabeni wonke ngezinhlobo ezahlukene zemvula njengeqhwa, imvula, isichotho, i-sleet noma i-mist....more
Kuyini Ukuvuna Amanzi Emvula?
Ukuvunwa kwamanzi emvula kuyindlela yokubeka amanzi nokuvula amanzi emvula emhlabeni noma ophahleni lwezakhiwo ngamapayipi noma emigodini emanzini okugcina amanzi....more